War Saxaafadeed 7 Festive Edition 2018 - Abaabulka Abaalmarinta
Bogga ugu weyn War Saxaafadeed 7 Festive Edition 2018
Ku soo dhawow daabacaaddii ugu dambaysay ee Abaalmarinta Wararka. Waxaan kuu haynaa sheekooyin iyo warar badan. Waad kala socon kartaa wararkayaga joogtada ah ee Twitter-ka iyo baloogyada toddobaadlaha ah ee ku yaal bogga guriga sidoo kale. Ku raaxayso astaamaha mucjisada ah ee 'Scott Monument' habeenkii fiidkii ee Edinburgh. Dhammaan jawaab celinta waxaa lagu soo dhaweynayaa Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Daabacaddan Kuliyada Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud-Aqoon-is-weydaarsiyo Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu aqoonsadaa Dhaawacyada Porn Wax-u--darsadayada Daraasadda Dhiirigelinta, Porno iyo Dembiyada Galmada Cambridge, England Frankfurt, Germany Virginia Beach, USA Budapest, Hungary SHAQADA ISKUULKA Caawinta waalidiinta Abaalmarinta CEO Bandhigyada warbaahinta Julie McCrone oo ka tirsan BBC Alba ayaa la toogtay Ruairdh Maclennan iyo Mary Sharpe Rabitaanada ugu kulul ee 2019
News Kuliyada Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud-Aqoon-is-weydaarsiyo Sannadkan waxaannu seminaarnaa barnaamijyada 10 RCGP-da la aqoonsan yahay ee ku saabsan saamaynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka maskaxda iyo jidheed ee UK iyo Ireland. Dadkeennu waxay ka soo duuleen meel fog, sida Finland, Estonia, Belfast iyo Nederland. Ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ah GP-yada, dhakhaatiirta maskaxda, cilmi-nafsiga, ardayda, shaqaalaha dhalinyarada, shaqaalaha bulshada, macallimiinta, la-taliyeyaasha, qareennada iyo daaweynta jinsiga.
Kooxda TRF ee Glasgow oo ay weheliyaan Katriin Kütt, oo ah aqoonyahan xagga galmada ee Eesti Tervishoiu Muuseum ee Estonia iyo tababaraha ka soo kabashada Matthew Cichy oo reer Belfast Waan ku faraxsanahay inaan la wadaagno Xarunta Dhalinyarada iyo Caddaaladda Dambiyada ee aqoon isweydaarsiga Glasgow iyo shirkadda sharciga Anderson Strathern mid ah Edinburgh. Waxa kale oo aanu leenahay iskaashi aad u taageersan Adeega Talo-bixinta Koonfur Galbeedka Killarney halkaas oo aan ku noqon doonno bisha Febraayo baahida jirta awgeed. Waxaan ku qanacsanahay xiisaha, xamaasadda iyo rabitaanka aqoon-isweydaarsiyo dheeri ah oo midkood lagu soo dari doono Cork guga. Hadaad jeceshahay inaanu nimaadno deegaankaaga, fadlan nala socodsii sida ugu dhaqsaha badan markaan ku guda jirno diyaarinta taariikho iyo goobo cusub oo loogu talagalay sannadka 2019.
Darryl iyo Mary oo ay weheliso Joy O'Donoghue iyo Anna Marie O'Shea oo ka tirsan Xarunta La-talinta ee SouthWest ee Killarney Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu aqoonsadaa Dhaawacyada Porn Bishii Juun ee Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) waxa uu aqoonsaday "jirro qasafsan galmo qasab ah" (CSBD) markii ugu horraysay abid cusub oo dib loo habeeyay ee Cudurrada Caalamiga ah ee Cudurada (ICD-11). See our blog on. Waxay ku guuleysatey guddiga xulashada sayniska iyo khabiirada caafimaadka inkastoo mucaaradka ka soo horjeeda kooxaha xiisaha leh ee ku xiran warshadaha porno badan oo dollar ah oo ay ka mid yihiin khabiirada jinsiga oo diidaya in porno aad u badan ay waligeed dhibaato noqon karto.
Wax-u--darsadayada Daraasadda Hay'adda Abaalmarinta Reward ma ahan oo kaliya kormeerida cilmi-baarista cusub ee ku saabsan saameynta porn-ka maalin kasta, laakiin waxaan sidoo kale wax ku darsannaa oo aan u helnaa xirfadlayaasha u baahan inay ogaadaan. Si taas loo dhammeeyo dib-u-eegiskayaga warqadkuwaas oo soo koobay cilmi baarista lagu soo bandhigay 4th Shirka Caalamiga ah ee Ku-Dalladaynta Dabeecadda (ICBA) ayaa lagu daabacay joornaalada xirfadeed Macaamilka Galmoodka iyo Isku Xidhnaanta. Halkan waa our blog on. Fadlan nala soo xiriir haddii aad jeclaan laheyd inaad hesho waraaq buuxa. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in waraaq la mid ah oo soo koobaya waraaqaha cilmi-baarista ee sanadkaan 5th Shirarka ICBA ayaa la soo gudbiyay waana la daabici doonaa, dhammaantoodna waa kuwo wanaagsan, hore 2019. Waanu kuu sheegi doonaa goorta.
Dhiirigelinta, Porno iyo Dembiyada Galmada Jilicsanaanta ragga dhalinyarada ah ee kudhisan maskaxda autism, gaar ahaan kuwa qaba cudurka Asperger 's Syndrome, si loogu isticmaalo macaamiisha internetka ayaa lagu sawiray. Marka qof qaba noocan ah xaalad maskaxeed oo dhalasho laga soo bilaabo dhalashada waxaa lagu xukumay in lagu haysto sawirro qarsoodi ah oo carruurta ah, waxay u muuqataa inay jiraan wax aan habooneyn nidaamka garsoorka sida ay ula dhaqmaan dadkaas. Waannu qornay dhowr Blogs maadada. Arag halkan a Sheekada hooyada. Safarrada TRF Cambridge, England Maamulaheena, Mary Sharpe, ayaa lagu sharfay inuu ka hadlo Suudaan Lucy Cavendish College, Cambridge bishii Juun sannadkan martiqaadka madaxwaynaha, Jackie Ashley. Mary waa xubin xiriiriye ah. Mawduuca Pornography Internet iyo Maskaxda Dhallinyarada marwalba waa dad qadarin ah oo hubaal ah oo hubaal ku filan, kulliyadda ayaa ku farxay xubnaha 90 ee jaamacada iyo dadweynaha ka soo qayb galay. Waxay ahayd mid ka mid ah dadkii ugu ballaadhnaa abid ee kuleejka loogu talagalay hadal dadweyne. Kadibna waxaan ku raaxeysanay Cuntada Aasaasiga ah ee Cunnada kuleejka oo Maryan ay ahayd marti sharaf. Way fiicnayd in lagu soo noqdo Cambridge.
Frankfurt, Germany Waxaan aaminsanahay (sida Amazon ee liisaska liiska) buugga buugga Gary Wilson Maskaxdaada on Porn - Pornography Internet iyo Seyniska Soogalootiga waa buugga ugu fiican ee suuqa oo sharxaya arrimaha ku saabsan pornography internetka iyo saameynta ay ku leedahay caafimaadka iyo xiriirka. Iyadoo boqolaal ka mid ah sheekooyinka raysashada iyo sayniska si fiican loo faahfaahiyay, waxay mawduucani si fudud u heli kartaa. Si gacan looga geysto horumarinta luqadaha kale (horeba Holland, carabi iyo jarmal, kuwa kale ee jira) waxaan kaqaybqaadannay Bandhigga Buugaagta Frankfurt ee Jarmalka. Waxaan la kulmay dad badan oo faa'iido leh oo rajeynaya in ay horumariyaan xiriirada sanadka soo socda.
Virginia Beach, USA Ardayda waxay ku faraxsan yihiin inay ku hadlaan Bulshada ee Horumarka Caafimaadka Galmada (SASH) shirkii sanadlaha ee Bishii Oktoobar ee Virginia Beach, USA halkaas oo aan kaqeybgalayaashu ugu soo bandhigeen qorshooyinka casharrada ee dugsiyada iyo hawlaha kale ee aqoon-is-weydaarsiga ee xirfadleyda. Mary Sharpe, madaxa shirkada, waa xubin ka mid ah Guddiga Maamulayaasha ee ururkan oo si joogto ah ula socdo horumarinta xirfadlayda ee goobtan ku yaal balli.
Budapest, Hungary TRF ayaa ku faraxsan in lagu martiqaado Budapest, Hungary si ay uga hadlaan shir caalami ah oo ay marti gelisay Wasaaradda Cadaaladda iyo Ururada NGO-yada ERGO horraantii Disembar. Waraaqda Maryan waxay ku saabsantay saameynta sawir-gacmeedka internetka ee ku saabsan tahriibinta dadka iyo hababka ugu wanaagsan ee wax looga qaban lahaa. Waxaa jiray khudbado ku saabsan ka faa'iideysiga jinsiga iyo xadgudubka caruurta ee ka socda Paris iyo Washington DC.
Dawn Hawkins oo ka socda Xarunta Qaranka ee Khamriga Galmada ee Washington DC
SHAQADA ISKUULKA TRF waxay sii wadaysaa inay wax barato waa iskuulo kuyaala qaybaha madaxa banaan iyo kuwa gobolka. Qorshayaasheena 6da ah ee casharka ah waxay kujiraan howsha tijaabada iyo wanaajinta kahor intaanan u soo bandhigin qiime aad macquul ugu ah iskuulada sanadka 2019. Agaasimaheena guud wuxuu kahadli doonaa xiriirka ka dhexeeya filimada qaawan iyo galmada ee dhacdada Policy Hub ee 31ka Janaayo 2019.
Caawinta waalidiinta Waa kan blog, Tilmaamaha Waalidiinta ee Lahaanshaha Sawir-qaadashada Internetka oo macluumaad ah oo ku saabsan khayraadyo badan oo bilaash ah. Waxaa si joogto ah loo cusbooneysiiyaa si joogto ah u fiirso.
Mary Sharpe oo ah madaxa shirkada ayaa loo magacaabay waxaana loo doortay a NatWest WISE100 abaalmarinta haweenka ee hawsheeda iyada oo ku taal aag cusub oo cusub. Waxaan ku faraxsanahay in shaqadeenu ay bilowday in la aqoonsado.
Bandhigyada warbaahinta BBC (TV iyo Radio), Daily Mail, The Times, London Evening News iyo wargeysyo kale oo warbaahin ah ayaa qoraal ku saabsan shaqadayada. See our bogga warbaahinta wixii faahfaahin dheeraad ah. Mary waxaa laga doonayaa inay ka muuqato dokumeenti ku saabsan BBC Scotland oo ku saabsan carruurta iyo filimmada iyo BBC ALBA ee Spring.
Julie McCrone oo ka tirsan BBC Alba ayaa la toogtay Ruairdh Maclennan iyo Mary Sharpe Rabitaanada ugu kulul ee 2019 Shaqaalaha iyo asxaabta hay'adda 'The Reward Foundation' waxay jeclaan lahaayen inaad dhammaantiin idiin wada rajeytaan sannadka 2019. Fadlan nagala soo xiriir Twitter @brain_love_sex. Haddii aad ogtahay qof jecel inuu wax badan ka barto saameynta porno ee caafimaadka iyo xiriirka fadlan kugula talin Maskaxdaada on Porn - Pornography Internet iyo Seyniska Soogalootiga.
Rabitaanada ugu kulul ee 2019 Shaqaalaha iyo asxaabta hay'adda 'The Reward Foundation' waxay jeclaan lahaayen inaad dhammaantiin idiin wada rajeytaan sannadka 2019. Fadlan nagala soo xiriir Twitter @brain_love_sex. Haddii aad ogtahay qof jecel inuu wax badan ka barto saameynta porno ee caafimaadka iyo xiriirka fadlan kugula talin Maskaxdaada on Porn - Pornography Internet iyo Seyniska Soogalootiga.
Xuquuqda daabacaadda © 2019 Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta Ma dooneysaa inaad bedesho sida aad u heshay emails?